FJKM Ankadifotsy Hainao ve / Autres / Accueil - FJKM Ankadifotsy
27/11/2013 15:36 -Ny fanampoizinana ara-tsakafo
Mampitombo haingana ny otrikaretina ny vanim-potoana mafana tahaka izao ka mila mitandrina isika @ firongatry ny fanampoizinana ara-tsakafo na ny intoxication alimentaire. Inona avy ireo soritr’aretina ? Ahoana no hiatrehana izany ary inona no mety fisorohana azo atao ? ...
23/11/2013 05:01 -Ny zava-mahasoa ao anatin’ny tongolo lay
Ny zava-mahasoa ao anatin’ny tongolo lay Efa hatramin’ny fahagola no nampiasaina ho fanafody nanasitrànana aretina maro ny tongolo lay. Ireo singa ao nanatiny no voalaza ho mampanankarena azy toa izany....
27/10/2013 12:50 -Ireo fanafody mampihena ny tahirin’angovo
Misy sokajim-panafody izay manala ny tahirina otrikaina sy singa mahavelona ao anatin’ny vatatsika ao. Raha manaraka fitsaboana ary ianao ka mahatsikaritra fa lasa rera-dava dia fantaro fa tokony hisy fanitsiana kely eo @ fomba fisakafoanana mba hiatohana tahirina magnésium, calcium sy ny otrikaina rehetra, indrindra fa ny sokajy B, izay misoroka ny harerahana....
10/10/2013 06:11 -Ireo fomba hiadina amin'ny hao
Ny tsara ho fantatra, fiarovana ny volon’ny zaza amin'ny hao, raha nifindran’ny hao ny zanakao..mety hanampy anao ity amin'izao fidiran'ny mpianatra izao....
04/09/2013 07:34 -Ny baranjely, mety @ olona miakatra tosi-drà
ireo kofehy mora levona hita ao amin’izy ity ihany koa no mahatonga azy manampy betsaka ny olona te hampihena lanja. Mampibotsina vetivety ny vavony mantsy ireo karazan-kofehy ireo ka mahatonga ilay olona ho mora voky haingana ary misoroka ny fihinanana anelanelam-potoana....
29/07/2013 15:26 -INONA NO ATAO RAHA LANIN’NY MOKA
Mangidihidy na mamaivay ny kaikitry ny moka. Hanamaivànana izany ary dia azonao atao ny manandrana ny iray amin’ ireto fomba manaraka ireto: -hosorana tongolo ny faritra voakaikitra....
09/07/2013 07:45 -NY FIFANDIAN-KANINA SY NY FAHASALAMANA
Ireo tombotsoa mety ho azo : Nisy fikarohana nataon'ny mpitsabo vahiny maromaro. Voalavo tratry ny homamiadana no nanaovana ny andrana, ka tsy nomena sakafo izy ireo nandritra ny fotoana voafetra, 2 na 1 andro. Taorian’io vao natomboka ny « chimiothérapie » ary hita tamin'izany fa zakan’ireto biby ireto kokoa izany fitsaboana izany rehefa ialohavana fifadian-kanina. ...
17/06/2013 14:31 -Ny asan’ny “RAISINS SECS”
Singa mamelona maro no ho azo amin'ny fihinanana ny raisins secs. Tahaka ny voaloboka ihany dia manankarena calcium sy manesioma, potasioma, fosforo, vy, siramamy voajanahary…ny raisins secs....
01/06/2013 13:09 -IREO ZAVATRA 7 MAMPIDI-DOZA REHEFA AVY MISAKAFO.
Fihetsika sy fanano maro no mety hampidi-doza eo amin'ny fiainana sy ny fahasalamana rehefa avy misakafo toy ny: mifoka sigara, ny mihinana voankazo avy hatrany, ny misotro dite, ny mamehy hetra, ny mandro ......
17/05/2013 15:58 -VOKATRA NY VOASARY, ARARAOTY
Mitombaka eny an-tsena ny voasary, voankazo tena mitahiry zava-tsoa maro azo hikolokoloana ny fahasalamana tsara ka mahaiza manararaotra....